မှားယွင်းတဲ့ ကွမ်ဒွမ်သုံးပုံနည်းလမ်း ၁၅ ခု – Gentleman Magazine
မှားယွင်းတဲ့ ကွမ်ဒွမ်သုံးပုံနည်းလမ်း ၁၅ ခု
ကွမ်ဒွမ် ဝတ်တာက လွယ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သင် အဲဒါကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဝတ်ပါရဲ့လား။ မဝတ်မိဖို့ များပါတယ်။ အင်ဒီယာနာ တက္ကသိုလ်ဟာ ကွမ်ဒွမ် အသုံးပြုမှုအကြောင်း လေ့လာမှု အခါ ၅၀ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၆ နှစ်ကြာ စုဆောင်းရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို တွက်ကြည့်ရာမှာ အမှားတွေ တစ်လှေကြီးတွေ့ရပါတယ်။ စုံတွဲတွေအကြားမှာ အတွေ့ရအများဆုံး ကွန်ဒွမ် မှားယွင်းအသုံးပြုမှု ၁၅ ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. သုံးတာ နောက်ကျတာ
လူတွေရဲ့ ၁၇ ရာနှုန်းကနေ ၅၁ ရာနှုန်းထိဟာ လိင်ကိစ္စစပြီးမှ ကွန်ဒွမ် အသုံးပြုကြပါတယ်။
၂. စောစော ချွတ်မိတာ
၁၄ ရာနှုန်းကနေ ၄၅ ရာနှုန်းထိရှိတဲ့ လူတွေဟာ လိင်ကိစ္စ မပြီးသေးခင် ကွန်ဒွမ်ကို ချွတ်တတ်ကြပါတယ်။
၃. မသုံးခင် ကွန်ဒွမ်ကို လုံးဝ အလိပ်ဖြေလိုက်တာ
၂.၁ ရာနှုန်းကနေ ၂၅.၃ ရာနှုန်းအထိ ယောက်ျားတွေဟာ ကွန်ဒွမ်ကို မတပ်ဆင်ခင် လုံးဝ အလိပ်ဖြေတတ်ကြပါတယ် တဲ့။ ဘယ်လိုများဝင်အောင်ထည့်သလဲတော့ မသိပါ။
၄. ထိပ်မှာ နေရာမရှိတာ
ကွန်ဒွမ်ထိပ်မှာ သုတ်ရည်ပြည့်ဖို့ နေရာချန်မထားတတ်တဲ့ လူဦးရေက ၂၄.၃ ရာနှုန်းကနေ ၄၅.၇ ရာနှုန်းထိ ရှိပါတယ်။
မိန်းမတွေရဲ့ ၄၈ ရာနှုန်းနဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ ၄၂ ရာနှုန်းဟာ ကွန်ဒွမ်ဝတ်အပြီး ကိစ္စမစခင် ထိပ်ဖူးမှာ ဝင်နေတဲ့ လေကို ညှစ်ထုတ်ဖို့ မေ့တတ်ကြပါတယ် တဲ့။
၆. ပြောင်းပြန် ကွမ်ဒွမ်များ
၄ ရာနှုန်းကနေ ၃၀.၄ ရာနှုန်းထိ ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ကွန်ဒွမ်ကို အင်္ဂါပေါ်မှာ ပြောင်းပြန်စွပ်ချ၊ ပြီးတော့မှ အတည့်ပြန်လှန်ပြီး ပြန်ဝတ် အသုံးပြုကြပါတယ် တဲ့။ အဲ့ဒါမကောင်းပါဘူး။ ကွန်ဒွမ်အပြင်သားကို သင့်အရည်တွေ ထိမိသွားရင် သူမ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ပါတယ်။
၇.ကွန်ဒွမ်မသုံးခင် အလိပ်ဖြေဖို့ မေ့လျော့ခြင်း
၁၁.၂ ရာနှုန်း မိန်းမတွေနဲ့ ၈.၈ ရာနှုန်း ယောက်ျားတွေဟာ ကွန်ဒွမ်ကို လုံးဝ အဆုံးထိ အလိပ်ဖြေသုံးလေ့ မရှိပါဘူး။
၈. ထက်ရှတဲ့ အရာတွေနဲ့ ဖောက်ခြင်း
၂.၁ ရာနှုန်းကနေ ၁၁.၂ ရာနှုန်းထိရှိတဲ့ သူတွေဟာ ကွန်ဒွမ်အိတ်ကို ကတ်ကြေး၊ ဓားတို့နဲ့ ဖောက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဖောက်တဲ့ ပစ္စည်းက အိပ်ကို ဖြတ်နိုင်ရင် ကွန်ဒွမ်ကိုလဲ ဖြတ်နိုင်မှာပါ။
၉. မသုံးခင် စစ်ဆေးမကြည့်ခြင်း
ကွန်ဒွမ် ဖောက်ပြီးနောက်မှာ ၈၂.၇ ရာနှုန်း မိန်းမတွေနဲ့ ၇၄.၅ ရာနှုန်း ယောက်ျားတွေဟာ မသုံးခင် စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ မေ့နေတတ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး အိတ်ကို ဖောက်မထားတာ သေချာအောင် စစ်ပါ။ ပြီးရင် Date အောက်နေမနေ ကြည့်ပါ။ အလိပ်ဖြေတဲ့အခါလဲ တစ်ခုခု မှားနေမနေ သေချာကြည့်ပါ။
၁၀. ချောဆီ မသုံးတာ
၁၆ ရာနှုန်းကနေ ၂၅.၈ ရာနှုန်းထိရှိတဲ့ လူတွေဟာ ကွန်ဒွမ်တွေကို ချောဆီမပါပဲ သုံးတတ်ကြပါတယ်။ သင်က အကြာကြီး ဆက်ဆံမယ်ဆို ချောဆီမပါရင် ကွန်ဒွမ် ပြဲသွားမှာပါ။
၃.၂ ရာနှုန်း မိန်းမတွေနဲ့ ၄.၇ ရာနှုန်း ယောက်ျားတွေဟာ ရော်ဘာ ကွမ်ဒွမ်တွေကို ဆီကို အခြေခံထားတဲ့ ချောဆီတွေနဲ့ သုံးကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ ရော်ဘာ ကို အားနည်းစေပြီး ပေါက်သွားတတ်စေပါတယ်။
၁၂. ဆွဲထုတ်တာ မမှန်တာ
၃၁ ရာနှုန်းသော ယောက်ျားတွေနဲ့ ၂၇ ရာနှုန်းသော မိန်းမတွေဟာ သုတ်ရည်ထုတ်အပြီးမှာ ကွန်ဒွမ်ကို မချွတ်တတ်ကြပါဘူး။ အဲဒါက တွဲလောင်းတွဲလောင်း ထားရမယ့် အရာ မဟုတ်ပါဘူး။
၁.၄ ရာနှုန်းကနေ ၃.၃ ရာနှုန်းထိ လူတွေဟာ ကွန်ဒွမ်တစ်ခုကို နှစ်ခေါက်လောက် ပြန်သုံးကြပါတယ် တဲ့။
၁၄. ထားသိုပုံ မမှန်တာ
၃.၃ ရာနှုန်းကနေ ၁၉.၁ ရာနှုန်းထိ ရှိတဲ့ လူတွေဟာ သူတို့ ကွမ်ဒွမ်တွေကို စနစ်တကျ မထားတတ်ကြပါဘူး။ အဲဒါတွေကို နေရောင်အောက်မှာထားတာနဲ့ သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ထည့်ထားတာကို ရှောင်ပါ။ ရော်ဘာသားကို ပျက်စီးစေလို့ပါ။
၁၅. ကွန်ဒွမ် လုံးဝ မသုံးတာ
ဒီဟာကတော့ လေ့လာချက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု မဟုတ်ပေမယ့် ထည့်ပြောသင့်လို့ပါ။ အသက် ၁၈ ကနေ ၂၄ အတွင်း ယောက်ျားတွေရဲ့ ၄၅ ရာနှုန်းကပဲ ကွန်ဒွမ် သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အသက်ကြီးလေ ပိုဆိုးလေဖြစ်ပြီး အသက်၂၅ နဲ့ ၃၄ ကြားယောက်ျားတွေရဲ့ ၂၉ ရာနှုန်းနဲ့ ၃၅ ကနေ ၄၄ ကြားယောက်ျားတွေရဲ့ ၂၁ ရာနှုန်းကပဲ ကွန်ဒွမ် သုံးတာ တွေ့ရပါတယ်
မှားယှငျးတဲ့ ကှမျဒှမျသုံးပုံနညျးလမျး ၁၅ ခု
ကှမျဒှမျ ဝတျတာက လှယျနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ သငျ အဲဒါကို မှနျမှနျကနျကနျ ဝတျပါရဲ့လား။ မဝတျမိဖို့ မြားပါတယျ။ အငျဒီယာနာ တက်ကသိုလျဟာ ကှမျဒှမျ အသုံးပွုမှုအကွောငျး လလေ့ာမှု အခါ ၅၀ လုပျခဲ့ပါတယျ။ ၁၆ နှဈကွာ စုဆောငျးရရှိတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို တှကျကွညျ့ရာမှာ အမှားတှေ တဈလှကွေီးတှရေ့ပါတယျ။ စုံတှဲတှအေကွားမှာ အတှရေ့အမြားဆုံး ကှနျဒှမျ မှားယှငျးအသုံးပွုမှု ၁၅ ခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. သုံးတာ နောကျကတြာ
လူတှရေဲ့ ၁၇ ရာနှုနျးကနေ ၅၁ ရာနှုနျးထိဟာ လိငျကိစ်စစပွီးမှ ကှနျဒှမျ အသုံးပွုကွပါတယျ။
၂. စောစော ခြှတျမိတာ
၁၄ ရာနှုနျးကနေ ၄၅ ရာနှုနျးထိရှိတဲ့ လူတှဟော လိငျကိစ်စ မပွီးသေးခငျ ကှနျဒှမျကို ခြှတျတတျကွပါတယျ။
၃. မသုံးခငျ ကှနျဒှမျကို လုံးဝ အလိပျဖွလေိုကျတာ
၂.၁ ရာနှုနျးကနေ ၂၅.၃ ရာနှုနျးအထိ ယောကျြားတှဟော ကှနျဒှမျကို မတပျဆငျခငျ လုံးဝ အလိပျဖွတေတျကွပါတယျ တဲ့။ ဘယျလိုမြားဝငျအောငျထညျ့သလဲတော့ မသိပါ။
၄. ထိပျမှာ နရောမရှိတာ
ကှနျဒှမျထိပျမှာ သုတျရညျပွညျ့ဖို့ နရောခနျြမထားတတျတဲ့ လူဦးရကေ ၂၄.၃ ရာနှုနျးကနေ ၄၅.၇ ရာနှုနျးထိ ရှိပါတယျ။
မိနျးမတှရေဲ့ ၄၈ ရာနှုနျးနဲ့ ယောကျြားတှရေဲ့ ၄၂ ရာနှုနျးဟာ ကှနျဒှမျဝတျအပွီး ကိစ်စမစခငျ ထိပျဖူးမှာ ဝငျနတေဲ့ လကေို ညှဈထုတျဖို့ မတေ့တျကွပါတယျ တဲ့။
၆. ပွောငျးပွနျ ကှမျဒှမျမြား
၄ ရာနှုနျးကနေ ၃၀.၄ ရာနှုနျးထိ ရှိတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေတော့ ကှနျဒှမျကို အင်ျဂါပျေါမှာ ပွောငျးပွနျစှပျခြ၊ ပွီးတော့မှ အတညျ့ပွနျလှနျပွီး ပွနျဝတျ အသုံးပွုကွပါတယျ တဲ့။ အဲ့ဒါမကောငျးပါဘူး။ ကှနျဒှမျအပွငျသားကို သငျ့အရညျတှေ ထိမိသှားရငျ သူမ ကိုယျဝနျ ရနိုငျပါတယျ။
၇.ကှနျဒှမျမသုံးခငျ အလိပျဖွဖေို့ မလြေ့ော့ခွငျး
၁၁.၂ ရာနှုနျး မိနျးမတှနေဲ့ ၈.၈ ရာနှုနျး ယောကျြားတှဟော ကှနျဒှမျကို လုံးဝ အဆုံးထိ အလိပျဖွသေုံးလေ့ မရှိပါဘူး။
၈. ထကျရှတဲ့ အရာတှနေဲ့ ဖောကျခွငျး
၂.၁ ရာနှုနျးကနေ ၁၁.၂ ရာနှုနျးထိရှိတဲ့ သူတှဟော ကှနျဒှမျအိတျကို ကတျကွေး၊ ဓားတို့နဲ့ ဖောကျလရှေိ့ပါတယျ။ ဖောကျတဲ့ ပစ်စညျးက အိပျကို ဖွတျနိုငျရငျ ကှနျဒှမျကိုလဲ ဖွတျနိုငျမှာပါ။
၉. မသုံးခငျ စဈဆေးမကွညျ့ခွငျး
ကှနျဒှမျ ဖောကျပွီးနောကျမှာ ၈၂.၇ ရာနှုနျး မိနျးမတှနေဲ့ ၇၄.၅ ရာနှုနျး ယောကျြားတှဟော မသုံးခငျ စဈဆေးကွညျ့ဖို့ မနေ့တေတျပါတယျ။ အရငျဆုံး အိတျကို ဖောကျမထားတာ သခြောအောငျ စဈပါ။ ပွီးရငျ Date အောကျနမေနေ ကွညျ့ပါ။ အလိပျဖွတေဲ့အခါလဲ တဈခုခု မှားနမေနေ သခြောကွညျ့ပါ။
၁၀. ခြောဆီ မသုံးတာ
၁၆ ရာနှုနျးကနေ ၂၅.၈ ရာနှုနျးထိရှိတဲ့ လူတှဟော ကှနျဒှမျတှကေို ခြောဆီမပါပဲ သုံးတတျကွပါတယျ။ သငျက အကွာကွီး ဆကျဆံမယျဆို ခြောဆီမပါရငျ ကှနျဒှမျ ပွဲသှားမှာပါ။
၃.၂ ရာနှုနျး မိနျးမတှနေဲ့ ၄.၇ ရာနှုနျး ယောကျြားတှဟော ရျောဘာ ကှမျဒှမျတှကေို ဆီကို အခွခေံထားတဲ့ ခြောဆီတှနေဲ့ သုံးကွပါတယျ။ အဲဒါဟာ ရျောဘာ ကို အားနညျးစပွေီး ပေါကျသှားတတျစပေါတယျ။
၁၂. ဆှဲထုတျတာ မမှနျတာ
၃၁ ရာနှုနျးသော ယောကျြားတှနေဲ့ ၂၇ ရာနှုနျးသော မိနျးမတှဟော သုတျရညျထုတျအပွီးမှာ ကှနျဒှမျကို မခြှတျတတျကွပါဘူး။ အဲဒါက တှဲလောငျးတှဲလောငျး ထားရမယျ့ အရာ မဟုတျပါဘူး။
၁.၄ ရာနှုနျးကနေ ၃.၃ ရာနှုနျးထိ လူတှဟော ကှနျဒှမျတဈခုကို နှဈခေါကျလောကျ ပွနျသုံးကွပါတယျ တဲ့။
၁၄. ထားသိုပုံ မမှနျတာ
၃.၃ ရာနှုနျးကနေ ၁၉.၁ ရာနှုနျးထိ ရှိတဲ့ လူတှဟော သူတို့ ကှမျဒှမျတှကေို စနဈတကြ မထားတတျကွပါဘူး။ အဲဒါတှကေို နရေောငျအောကျမှာထားတာနဲ့ သငျ့ ပိုကျဆံအိတျထဲ ထညျ့ထားတာကို ရှောငျပါ။ ရျောဘာသားကို ပကျြစီးစလေို့ပါ။
၁၅. ကှနျဒှမျ လုံးဝ မသုံးတာ
ဒီဟာကတော့ လလေ့ာခကျြရဲ့ အစိတျအပိုငျးတဈခု မဟုတျပမေယျ့ ထညျ့ပွောသငျ့လို့ပါ။ အသကျ ၁၈ ကနေ ၂၄ အတှငျး ယောကျြားတှရေဲ့ ၄၅ ရာနှုနျးကပဲ ကှနျဒှမျ သုံးခဲ့ကွပါတယျ။ အသကျကွီးလေ ပိုဆိုးလဖွေဈပွီး အသကျ၂၅ နဲ့ ၃၄ ကွားယောကျြားတှရေဲ့ ၂၉ ရာနှုနျးနဲ့ ၃၅ ကနေ ၄၄ ကွားယောကျြားတှရေဲ့ ၂၁ ရာနှုနျးကပဲ ကှနျဒှမျ သုံးတာ တှရေ့ပါတယျ
Previous: အာရှမှာ အချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုဟ်၏ ဘ၀နေထိုင်နည်း (၈)ခု
Next: ကလေးအဖေ ဖြစ်သွားနိုင်မယ့် ခပ်တုံးတုံး အမှား ၁၀ ခု